हेलिकप्टर चढेर पत्रकार महासंघको बैठक, हिरासत रहेका ‘प्रकाण्ड’ छलफलका पात्र ! – YesKathmandu.com
हेलिकप्टर चढेर पत्रकार महासंघको बैठक, हिरासत रहेका ‘प्रकाण्ड’ छलफलका पात्र !
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु हेलिकप्टर चडेर २४ साउन दिउँसो लुम्बिनी पुगे । लुम्बिनीमा कुनै अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रम थिएन । थियो त केवल नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक ।
बैठकका लागि राजधानी काठमाडौंबाट टुरिष्ट बस रिजर्व गरिएको थियो । बसमा केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य लुम्बिनी पुगेका थिए । तर कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र सपरिवारसहित हेलिकप्टरमा लुम्बिनी पुगे । लुम्बिनी बैठकले पत्रकारका बिषयमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन तर पदाधिकारीहरु भने हेलिकप्टरमा मस्ति गर्दै राजधानी फर्किए । प्रदेश अध्यक्षहरुको रिपोटिङ सुनेर बैठक सकिएको थियो ।
बैठकमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले राजनीतिक प्रसंग उठाए । भर्खर ७ करोड चन्दा असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका खड्गबहादर विक प्रकाण्ड चर्चाका पात्र बने । ‘कि उनीहरुलाई अपराधी घोषणा गर्नु परयो नत्र भने सरकारले पक्राउ गर्नु गलत हो’ बैठकमा अध्यक्ष आचार्यले भने ‘राजनीति गर्न पाउने अधिकार सवैको छ, प्रकाण्डले पनि राजनीति गर्न पाउनु पर्दछ ।’
अध्यक्ष आचार्यले प्रकाण्डका पक्षमा यतिमात्र के भनेका थिए, युनियन निकटका पत्रकारहरुले राजनीतिक बिषय नउठाउन अध्यक्ष आचार्यलाई चेतावनी दिए । ‘यो राजनीतिक बिषय उठाउने थलो होइन, यो बिषयले यहाँ प्रवेश पाउँदैन’ महासचिव रमेश बिष्टले यतिभन्दै सरकारलाई गाली गरे ‘यो तानाशाह सरकार हो, यसकाबिरुद्ध लड्ने भए बरु एउटा प्रस्ताव पास गरेर जाउँ ।’
बैठकका एजेण्डाभन्दा बढि छलफल प्रकाण्डकै बिषयमा भयो । कांग्रेस निकट प्रेस युनियन सम्बद्ध पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारका बिरुद्धमा एउटा प्रस्ताव नै पास गरी जानुपर्ने तर्क राखे । तर अध्यक्ष आचार्य त्यसका लागि तयार नभएको बैठकमा सहभागि एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।